Misy karazana fitaovana sy fomba amam-panao maro mba handrafetana ny valindrihana ao amin'ny loggia, ny tena zava-dehibe dia ny tokony ho fanamafisana ny hafanana, hahatohitra ny hatsiaka sy ny hafanana ary ny fahatsarana dia mameno ny famolavolana ny rindrina sy ny ety.
Raha te hanapa-kevitra hoe iza ny valiny no tsara indrindra amin'ny fanaovana loggia, tokony handinika safidy maro izay samy hafa amin'ny vidiny, ny fahasarotana ny fametrahana sy ny antso an-telefaona.
Safidy sasantsasany amin'ny famitana ny valindrihana ao amin'ny loggia
Ny fantsom-batana dia iray amin'ireo fitaovam-panarenana manerantany, izay mety, indrindra indrindra, ny fametrahana ny valindrihana ao amin'ny loggia. Ny hazo voajanahary dia mora ampiasaina miaraka amin'ny fitaovana rehetra, saingy tena tsara ny mampiasa azy io amin'ny famaranana ny toerana rehetra. Ity fitaovana ity dia manintona ny tontolo iainana, mora ampiasaina, ampy maharitra.
Ny valindriaka mihodinkodina eo amin'ny loggia dia ho safidy lafo kokoa, fa tena tsara tarehy, manome fahafahana hanangana fitaovana izay manana ny toetry ny toetr'andro ny toetr'andro, mihetsika haingana. Mba hamoronana izany, amin'ny ankapobeny, tokony hanasana ny manam-pahaizana.
Sarotra ny manamboatra valan-drindrina mando amin'ny loggia, izany no mitaky ny fahaiza-miasa iray. Ny tsara indrindra dia ny fampiasana azy ireo amin'ny efitrano mafana. Sarobidy be ny vidin'ny valindrihana toy izany, matetika izy io no ampiasaina amin'ny famolavolana efitrano hafa.
Ny valindrihatry ny PVC ao amin'ny loggia dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra, mety ho mora foana ny hidirana ao anatiny. Ny fametrahana azy dia tsy mitaky sehatra tsara, mora fotsiny, ny vidin'ny setroka toy izany dia tsy lehibe, ary ny vokatra dia tena mendrika. Any amin'ny faritry ny lavarangana, azonao atao ny manafina ny fantsona, manamboatra ny vala amin'ny lampihan'ny PVC.
Ny fantsom-piravahana fanenitra no ampiasaina ao amin'ny loggia, indrindra fa raha misy fahasamihafana eo amin'ny mari-pana sy haavon-danitra. Azo atao anefa ny manamboatra azy io amin'ny toe-javatra tsara kokoa, ny plafonda misy lavarangana dia manana endrika tsara tarehy, afaka manana endrika isan-karazany.
Patina eo amin'ny fanaka
Ahoana ny fomba hampidirana ny lalambe eo amin'ny lalantsara?
Kilalao inona no tsara kokoa - plastika na MDF?
Kofehy ho an'ny ambiny romanina
Miatrika biriky ho an'ny biriky ho an'ny orinasa ivelany
Takona mitsangana - tavy na PVC?
Tena zava-dehibe izany: Voampanga ho nanao fanolanana i Harvey Weinstein!
Tazo mozika ao amin'ny efitra fandroana
Lalànan'ny Repoblika Tseky
Rezi ao amin'ny kibo
Sotoiar misy borosy
Sary vehivavy ho an'ny Halloween
Ahoana ny hanangom-boankazo - mahandro mahandro ao an-trano
Kvass - tsara sy ratsy
Fitsipika momba ny fitaterana entana eny amin'ny fiaramanidina
Ny metro lalina indrindra eto an-tany
Hoya - fikarakarana